छोरीलाई न्याय माग्न धर्ना बसेका यज्ञराज पन्त बिरामी | Hamro Doctor News
बुधबार, ८ जेष्ठ २०७६ /
छोरीलाई न्याय माग्न धर्ना बसेका यज्ञराज पन्त बिरामी
कञ्चनपुर, ३० कात्तिक । बलात्कार पछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको हत्यारालाई सार्वजानीक गर्न माग गर्दै धर्नामा बसेका निर्मलाका बुबा यज्ञराज पन्त बिरामी परेका छन् । चिसो मौसममा पाँचदिनदेखि लगातार पालमुनि धर्नामा बस्दा उनिहरुको स्वास्थ्य बिग्रिन थालेको हो ।
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तका हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आइतबारदेखि पीडित परिवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको द्वारमा अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका छन् । निर्मलाका सहपाठी, बुवा यज्ञराज, आमा दुर्गादेवी, कान्छी आमा लक्ष्मी र आफन्तहरु धर्नामा बसेका छन् ।
चिसो बाहेक धर्ना बसेको ठाउँ नजिकै भएको झाडीबाट आउने लामखुट्टेले टोकेर सताउने गरेको निर्मलाकी कान्छी आमा लक्ष्मीले बताइन् । साँझ परेपछि पालबाट सित चुहिने भएकाले निर्मलका बुवा बिरामी परेको उनले बताइन् । अन्यलाई पनि चिसोले गर्दा खोकीले सताएको छ । अहिले निर्मलाका बुबाको उपचारका लागि धर्ना बसेकै ठाउँमा महाकाली अञ्चल अस्पतालका चिकित्सक पुगेर उपचार गरेका छन् । पन्तको रक्तचाप कम हुँदै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. किशोरकुमार बोहराले जानकारी दिए ।
Last modified on 2018-11-17 06:59:43
काफल : कफदेखि पेटको क्यान्सरसम्मका लागि लाभदायक
काठमाडौं । काफल नेपालीको स्वादमा मात्र होइन, गीत संगीतमा समेत बसेको छ ।...
बुटबलमा क्यान्सर अस्पताल स्थापनाका लागि ५० लाख संकलन
रुपन्देही ७ जेठ । बुटबलमा सामुदायिक क्यान्सर अस्पताल स्थापना हुने भएको छ । अस्पताल...
मानसिक स्वास्थ्य अभियान सुरुः औषधि भन्दा अन्तर्क्रियामा जोड
काठमाडौं, ७ जेठ । जगरनट माइन्डसेट मानसिक स्वास्थ्य अभियन्ता जगन्नाथ लामिछानेले मानसिक...
सहमतिपछि अनसन तोडेकी नर्स शेर्पा फेरि अनसनमा
काठमाडौं, ७ जेठ । दश बुँदे सहमति गरेर अनसन तोडिएका भनिएको नर्स डिक्की शेर्पाले फेरि...
बर्ड फ्लुका कारण युवकको मृत्यु भएपछिको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?
छ हप्तापछि गर्भपतन गर्न नपाइने गरि ल्याइयो कडा कानून
उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिले कस्ता खानेकुरा खाने ?